Universal Online TV | किन १३ दिनसम्म क्रिया बस्नुपर्छ ? यस्तो रहेछ कारण किन १३ दिनसम्म क्रिया बस्नुपर्छ ? यस्तो रहेछ कारण
किन १३ दिनसम्म क्रिया बस्नुपर्छ ? यस्तो रहेछ कारण
संस्कार मान्दै नमानेर लोप गराउनुभन्दा पाँचदिने विधि अनुसरण गर्दा सहज र मितव्ययी हुने उनको भनाइ छ। यो विधि सहज र मितव्ययी हुन मात्र होइन।
पुष्पकमल दाहालले जे गर्नुभयो, त्यो धर्मशास्त्रअनुसारै छ,’ उनले भने, ‘वेदले त्योभन्दा लामो र जटिल मृत्यु संस्कारको अपेक्षा राख्दैन, र जरुरी पनि छैन।’